Boriborintany I: nodiovina ny lakandrano 500 m | NewsMada
Mampidi-dranonketsa ny tantsaha eny Ankasina sy Andohatapenaka II sy III, amin’izao volana aogositra izao. Hanamora izany fampidiran-drano izany, nikarakara hetsika fanadiovana ireo lakandrano fampidirana rano hambolena niaraka tamin’ny Boriborintany voalohany ireo fikambanan’ny mpamboly sy ireo RF2, ny faran’ny herinandro teo.
Araka ny nambaran’ny lefitra faharoan’ny delegen’ny Boriborintany voalohany, Razanadrakoto Heriniaina, tototra fako sy loto ny lakandrano famatsiana rano ho an’ireo fambolena eny amin’ny faritra Ankasina, Andohatapenaka I sy II kanefa dia mamokatra sakafo hohanina no vatsin’ity lakandrano ity.
Noho izany, nandray andraikitra ny kaominina amin’ny fanentanana ny rehetra amin’ny tsy hanariana rano maloto sy fako eny amin’izany lakandrano izany.
Tokony hofadina ihany koa ny manasa lamba sy ny manary maloto any anatin’itony lakandrano itony. Ankoatra izay, nanentana ihany koa ity tompon’andraikitra ity ny hijeren’ireo mponina manokana ny RF2 eny anivon’ny fokontany, izay miezaka ny manadio sy manala ireo fako isan-tokantrano.
Mirefy 500 metatra eo ho eo ity lakandrano nodiovina ity . Mandrora mitsilany ihany ireo mponina eny an-toerana ka izany indrindra no anton’ny fanentanana.